Apple TV koa tsy hanohana ny seho audio tsy misy fatiantoka an'ny Apple Music Avy amin'ny mac aho
Manohy manangona vaovao momba ny fiasa vaovao an'ny Apple Music izahay. Sady audio spatial sy audio lossless ao amin'ny Apple Music, natolotry ny orinasa andro vitsivitsy lasa izay tsy hifanaraka amin'ny Apple TV izany. Ny fitaovana vaovao natolotra ho an'ny fijerena sarimihetsika, andian-tsarimihetsika na lalao dia tsy manohana ny kalitaon'ny feo avo indrindra amin'ny Apple Music.
Vao avy nandefa ny Apple TV 4k vaovao, tsy ela akory izay ny AirPods Max dia natomboka ary mihevitra fa ny AirPods Pro dia iray amin'ireo finday be mpividy indrindra, tsy takatra loatra fa Apple dia nandefa fampiasa ao amin'ny Apple Music tsy mifanaraka amin'ireo fitaovana ireo. Fa izany no izy. Efa nilaza taminay izahay fa ny maodely AirPods isan-karazany dia tsy mifanaraka fa raha ny filazan'i Jon Prosser dia mety hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy izy ireo. misaotra tamin'ny fanavaozana ny lozisialy. Eny, Misafidy ny tsy hanao aho.
Toy izany koa no hitranga amin'ny Apple TV. Mety afaka mitendry audio lossless amin'ny fomba sasany ianao noho ny fanavaozana ny lozisialy. Ka farafaharatsiny mba azo jerena ao amin'ny antontan-taratasy ofisialy Apple izay miresaka momba ny fampifanarahana ireo kalitao audio vaovao miaraka amin'ireo fitaovana Apple ankehitriny.
Ny antontan-taratasy dia manambara fa ny Apple TV 4K "dia tsy manohana an'i Hi-Res Lossless amin'izao fotoana izao" ary ny ambaratonga tsy misy fatiantoka mahazatra dia manomboka amin'ny 16-bit amin'ny 44,1 kHz ka hatramin'ny 24-bit amin'ny 48 kHz ho hita ao amin'ny Apple TV. 4K amin'ny fanombohana. Ny fampiasan'i Apple ny teny hoe "amin'izao fotoana izao" dia mamela ny varavarana hisokatra ho fanavaozana ny lozisialy ho avy miaraka amin'ny fanohanan'ny Hi-Res Lossless ho an'ilay fitaovana, fa Apple dia tsy nanamafy izany, amin'izao fotoana izao.
Jona no volana manan-danja mba hahafantarako bebe kokoa ny fivoaran'ny audios vaovao ao amin'ny Apple Music
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple TV koa tsy hanohana ny seho audio tsy misy fatiantoka an'ny Apple Music.
Afaka mividy Apple Watch Aurum-Edition amin'ny vidiny 6.000 Euros ianao izao